पिसिआरको रिपोर्ट ढिलो भएको भन्दै आन्दोलित
On: २०७७ जेष्ठ ३१ गते, शनिबार, ०८:१५ बजे प्रकाशित
रौतहट। कतै पिसिआर रिपोर्ट आउन ढिलो भएको भन्दै आन्दोलन त कतै सरकारले खर्च गरेको १० अर्ब रुपैयाँको खोजी। शहरमा मात्र हैन गाँउमा पनि कोरोनाको कारण जनजीवन आँतकीत हुँदै गएको समाचार आएका छन्।
कतै क्वारेन्टाइनको भद्रगोल अवस्थाका कारण भागेका खवर त कतै पिसिआर परिक्षण हुन नसक्दा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको समाचारको साक्षी बस्न परेको छ यतिखेर। अनि मृत्यु भइसकेपछि कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएका खवरले कसको मन नरोला र?
माथिका केही दृष्टान्त नै राज्यका विभिन्न पदमा बसेर शक्तिको दोहन गर्दै राज्य लुटेकाहरूको कारण हो भनेर नागरिकले आरोप लगाएर ब्यानर सहितको प्रदर्शन गरेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा देखिएकै छ।
फेरि रौतहटको राजपुर नगरपालिकास्थित क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका आन्दोलित भएको स्थानीय पत्रकारले उल्लेख गरेका छन्। राजपुर नगरपालिका १ को बहुअर्वा क्वारेन्टाइनमा बसेका बिरामी तथा उनका आफन्तले पिसिआर रिपोर्ट आउन ढिलो भएको भन्दै शनिबार मुख्य सडक अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन नै गरे।
अन्य सम्बन्धित समाचार: सवारी ज्यान मुद्दामा फरार वडाध्यक्ष पक्राउ
त्यसो त सामान्य सिटामोलका लागि ठूलै कष्ट गर्न पर्ने देशका जनताले धन्न पीसीआर टेष्ट गर्न पाएका छन् भनेर दङ्ग पर्नुको विकल्प अरु केही छ र?
जे भएपनि उक्त आन्दोलनमा सहभागीहरूले बाटो खुलाउन गएका प्रहरीमाथि आक्रोश स्वरुप प्रहरीलाई ढुंगा मुढा प्रहार गरे। आक्रमणबाट तीनजना प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी भरत श्रेष्ठले बताए।
घटनालाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै नेपाली सेना समेत खटाइएको थियो। सो क्रममा प्रहरीले २ राउन्ड हवाई फायर र १२ सेल अश्रुग्यास प्रहार गर्नुपरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
झडपमा परेर क्वारेन्टाइनमा बस्ने र उनीका आफन्त गरी ३ जना घाइते भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुरका प्रमुख सई दीपक गुप्ताले पिसिआर रिपोर्ट नआएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनेहरूलाई सम्झाउन गएका प्रहरीमाथि उनीहरूले एकाएक आक्रमण गरेका थिए।
अन्य सम्बन्धित समाचार: प्रधानमन्त्रीको शपथ आज
हाल उक्त क्षेत्रमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको र अवस्था सामान्य भएको सई गुप्ताले जानकारी दिए। पछिलो केही दिन देखि राजपुरकै जस्तो जिल्लाको कैयौँ क्वारेन्टाइनमा तनाव हुने गरेको छ।
क्वारेन्टाइनमा लगातार १५ दिनसम्म बस्दा पनि पिसिआर रिपोर्ट नआएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने र प्रहरी र स्वास्थकर्मीमाथि आक्रमण भइरहेको छ।
२०७७ जेष्ठ ३१ गते, शनिबार, ०८:१५ बजे प्रकाशित